Ntuziaka banyere otu esi ede edemede aha na ederede
Isi okwu, biputere aha, aha, isiokwu… ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ha, ha bụ ihe kachasị mkpa na ọdịnaya ọ bụla ị nyefere. Olee otú ọ dịruru mkpa? Dị ka nke a Quicksprout infographic, mgbe 80% nke ndị mmadụ na-agụ isi okwu, nani 20% nke ndị na-ege ntị na-pịa. Mkpado aha dị oke egwu search engine njikarịcha na isi ihe dị mkpa iji nweta ọdịnaya gị kesara na mgbasa ozi mmekọrịta.
Ugbu a na ịmara na isi okwu dị mkpa, ị nwere ike ị na-eche ihe na-eme ka ọ dị mma na otu esi ede otu, nri? Ọfọn, taa bụ ụbọchị ọma gị n'ihi na Quicksprout mepụtala infographic nke ga-akuziri gi nke ahu.
Iji adjective, negativity, ọnụ ọgụgụ na mkpokọta usoro nke Number ma ọ bụ ịkpalite Okwu + Adjective + Keyword + Nkwa nhata ederede zuru oke. Neil kwuru banyere aha ndị dị mkpụmkpụ ma na-atọ ụtọ n'ihi na ndị folks na-enyocha oge a.
Ọ bụ ezie na enwere m ekele mgbe niile maka aha dị nkenke, anyị ahụla ọtụtụ saịtị nwere nnata nzaghachi na-enweghị atụ na aha ogologo, aha verbose nke jikọtara onye na-agụ ya. Agaghị m atụ egwu ịnwale ma obere ma ogologo. Nwere ike ịchọ ịhazie aha aha na isi akụkọ ndị ahụ ka igwe nchọta ghara igbupụ isi okwu ị rụsiri ọrụ ike iji zụlite.
Lezienụ anya na nke ikpeazụ nke ndụmọdụ… isi akụkọ na-ada ada n'ihi na ha adabaghị na ederede edere, ha akọwapụtaghị ya nke ọma, aha ndị ahụ edoghị anya. Chọrọ enyemaka ọzọ ma chọọ ikpori ndụ? Echefula ihe Generator Echiche nke sitere na Portent nke ahụ na-egosi ụfọdụ nko maka aha gị, gụnyere akụkọ ndị na-adọrọ uche site na atụmatụ dị ka ego, ọgụ, akụ, akụkọ, nke ọzọ, na ọchị.
Tags: aghaAhịa Bakernnabata ihe eji ewe iheContentlymegidereoyiriikwughachiNdị ọchụnta ego-njemngwa ngwaakụkọesi dee akwukwoesi dee ahaọchịdịkwuo pịa-site na ọnụegodịkwuo SERP CTRUdogbeMarketingLandikeneil patelNewszuru okè akụkọibuỌnọdụquicksproutakụMbidoAtụmatụ maka isi akụkọAtụmatụ maka ahautu aha
Aug 25, 2014 na 10: 07 AM
Amamiihe! Anyi choro ihe edeputara nke oma na webu.